Toeram-pivarotana NCCC: afobe mahafaty ho an'ny mpitsidika 37 mandritra ny hazakazaka krismasy
Home » Vaovao momba ny dia an-tserasera » Toeram-pivarotana NCCC: afobe mahafaty ho an'ny mpitsidika 37 mandritra ny hazakazaka krismasy
Desambra 24, 2017
Ireo mpitsidika manerana an'izao tontolo izao dia azo jerena ao amin'ny NCCC Mall any Davao, Philippines. “NCCC dia toeram-pivarotana lehibe mahafinaritra. Toerana tsara hisakafoanana, hiantsenana na hijerena sinema amin'ny sinema. Misy arcade koa ao ”, hoy i Lance_Kerwin mpizahatany iray avy any Norvezy andro lasa izay.
Ity toeram-pivarotana lehibe ity dia nivadika ho afobe mahafaty ho an'ny mpitsidika 37 ny asabotsy, nandritra ny fiantsenana haingana tamin'ny Noely.
Olona fito amby telopolo no ninoina fa maty tao anaty afo tao amin'ny magazay. Nilaza ny komandin'ny birao mpiaro ny afo any an-toerana fa ny "aotra" no tombony ho an'ireo 37 tafavoaka velona, ​​hoy i Duterte, izay zanaky ny filoha koa, nanoratra tao amin'ny Facebook. .
Natomboka tao amin'ny NCCC Mall nisy rihana efatra ny asabotsy maraina teo ary tafahitsoka tao ny olona, ​​anisan'izany ny foibe fiantsoana ambony rihana, hoy i Ralph Canoy, polisy iray ao amin'ny distrika, tamin'ny AFP. Nilaza i Canoy fa mbola nandeha alohan'ny marainan'ny alahady ny afo.
"Nanomboka tamin'ny rihana fahatelo ny afo, izay misy ny vokatra toy ny lamba, fanaka vita amin'ny hazo ary fanaka vita amin'ny plastika, ka vetivety dia niitatra ny afo ary elaela vao maty," hoy izy.
Nilaza izy fa ny mpikaroka dia mino fa ny sasany amin'ireo mety novonoina dia voafandrika tao amin'ny foibe fiantsoana, izay miasa 24 ora isan'andro.
"Mety hoe nandritra ny niasan'izy ireo dia tsy tsikaritr'izy ireo avy hatrany ny fielezan'ny afo," hoy i Canoy momba ireo mpiasan'ny foibe fiantsoana.
Ny filoha Rodrigo Duterte, izay ben'ny tanànan'i Davao nandritra ny roapolo taona teo ary mbola mipetraka ao an-tanàna, dia nitsidika ilay toeram-pivarotana tamin'ny sabotsy alina mba hampionona ireo havan'ny niharam-boina, hoy ny iray tamin'ireo mpanampy azy tamin'ny AFP. Hita nitomany izy.
I Davao no tanàna lehibe indrindra any atsimon'i Filipina. Sahabo ho 1,000 600 kilaometatra atsimon'ny Manila izy io.
Ny tanànan'i Davao, ao amin'ny nosy atsimon'i Filipina any Mindanao, dia ivon-toerana amoron-tsiraka amoron-tsiraka akaikin'ny tendrombohitra Apo avo 2,954m, tampon'ny tampon'ny firenena. Ao afovoan-tanàna, ny People's Park dia fantatra amin'ny sary sokitra vazimba miloko sy loharano mirehitra. Izy io koa dia trano misy an'i Durian Dome, nantsoina tamin'ny voankazo maranitra sy manitra izay maniry betsaka ao Mindanao. Namakivaky ny tanàna ny renirano Davao.